Raw Alpha GPC vovoka (28319-77-9) mpanamboatra - Phcoker Chemical
SKU: 28319-77-9 Sokajy: Drug Smart
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9) video
Ny l-Alpha glycerylphosphorylcholine (alpha-GPC, alfoscerate choline) dia singa voajanahary voajanahary hita ao amin'ny atidoha. Izy io dia paracetamimétique acetylcholine précurseur izay mety manana ny mety ho fitsaboana ny aretina Alzheimer sy ny demony hafa.
Ny Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) dia manome haingana haingana ny choline ao amin'ny atidoha amin'ny sisin'ny ati-doha ary mialoha ny biosynthetic ny acetylcholine. Zava-mahadomelina tsy voatsabo ao amin'ny ankamaroan'ny firenena izany.
Any Eoropa ny alfa-GPC dia fanafody fitsaboana ho an'ny aretin'ny Alzheimer. Ao amin'ny United States, ny Alpha-GPC dia azo ampiasaina amin'ny sakafom-bokatra, indrindra amin'ny vokatra entina hanatsarana ny fahatsiarovana. Ny fampiasana ny alpha-GPC dia ahitana ny fitsaboana ireo karazana trondro, ).
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9) Specifications
Product Name Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka
Anarana simika Choline Alfoscerate; Alpha GPC; L-Alpha glycerylphosphorylcholine; Choline glycerophosphate
molekiolan'ny Formula C8H20NO6P
molekiolan'ny Wvalo 257.223 g / mol
mitsonika Point 142.5 ° C
hatsiaka Point Tsy misy daty misy
Ny antsasaky ny biolojia Ny antsasaky ny Alpha GPC dia manodidina ny ora 4-6 saingy voalaza fa ny tampon'ny 1-2 ora ny tsindrona
Color Vovoka mafy
Storage Temperature 0 - 4 ° C ho an'ny fotoana fohy (andro na herinandro), na -20 ° C ho an'ny fotoana maharitra (volana).
Application Choline Alfoscerate dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny aretina Alzheimer sy ireo dolara hafa.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9) Description
Alpha GPC no anarana iraisan'ny L-Alpha glycerylphosphorylcholine, cholinergic nootropic izay mitranga avy amin'ny natiora fa azo atao ihany koa ho fanampiny. Ny Alpha GPC dia ampahafantarina amin'ny fomba haingana sy azo atokisana ho an'ny atidoha ho an'ny atidoha ho fananganana ny acetylcholine neurotransmitter neurotransmitter.
Manana tombontsoa mahery vaika ho an'ny atidoha sy ny vatana ary mety hampivoatra ny karazam-pahaizana manontolo, hampiroborobo ny fahasalaman'ny sela, ary hanamafy ny fahasalamana ho an'ny neurochemical ao amin'ny atidoha.
Ny Alpha-GPC dia mamoaka haingana ny choline amin'ny atidoha amin'ny sisin'ny ati-doha ary mialoha ny biosynthetic ny acetylcholine. Zava-mahadomelina tsy voatsabo ao amin'ny ankamaroan'ny firenena izany. Ny FDA dia namaritra fa ny tsimokaretina tsy mihoatra ny 196.2 mg / olona / andro dia heverina ho GRAS. Any amin'ny firenena eoropeanina sasany, dia mifehy ny zava-mahadomelina izy io ary ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9) Mechanisman'ny Asa?
Alpha-GPC manohana ny rafi-pitabatabana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny asetylcholine sy ny cholinergic. Mety hampiakatra ny isan'ireo iraka hafa miaro ny atidoha toy ny:
Ankoatra izany, araka ny voalaza, mety hampiroborobo ny haavo hormonina koa izany.
soa ny Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9)
Fahatsiarovana ny fahatsiarovana sy fahatsapana
Manatsara ny fahasitranana
Mampitombo ny fahombiazan'ny Atletisma, ny herim-po mahery vaika ary ny fitadiavana vahaolana haingana
Hanatsara ny maso
Hiaro ny taratra
Recommended Rola Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9) levitra
Alpha GPC dia manodidina ny 40% amin'ny lanjany. Noho izany 1,000 mg ny pilotra Alpha GPC dia manome ny 400 mg ny choline.
Alpha GPC nanolo-kevitra ny dosage ho tombontsoan'ny cognitive dia 250-1,200 mg isan'andro. Indreto misy famotehana ny fitondrana dosing:
Alzheimer sy ny demony: 400 mg, 3X isan'andro ho an'ny 6 - 12 volana.
Famerenana famonoana: 1,000 mg isan'andro amin'ny volana 1 (toy ny injections).
400 mg oral, 3X isan'andro ho an'ny 5 volana aty aoriana
Fanatanjahan-tena: 250 mg isan-kerinandro amin'ny herinandro 1 
600 mg isan'andro ho an'ny 1 - 6 andro.
Mijery maso: 400 mg, 2X isan'andro ho an'ny 2 volana.
Araka ny porofo tsy an-kiato, ny dôza noho ny tsy mitongilana dia avy amin'ny 400 ka hatramin'ny 1,200 mg / andro. Azonao atao ny manomboka amin'ny farany ambany ary manara-maso ny valinteninao.
Side effects ny Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) vovoka (28319-77-9)
Potipotika Alpha-GPC dia azo antoka tamin'ny fitsapana rehetra. Ao amin'ny ampahany amin'ny marary, dia niteraka fahalemena hafa toy ny:
Raha ny fandalinana ny fiarovana ny alika sy ny raty, ny megoades (hatramin'ny 3,000 mg / kg) dia somary nihena kely ny asan'ny biby. Ny mpikaroka dia namintina fa ny fotoana maharitra (26 herinandro) ny fandaniana alpha-GCP ny 150 mg / kg (mihoatra ny 10 isan'andro isan'andro ho an'ny olon-dehibe) dia tsy manana fahasimbana ara-pahasalamana.
Noho ny tsy fisian'ny antontan-kevitra momba ny fiarovana, ny ankizy sy ny bevohoka dia mety maniry ny hisorohana ny alfa-GPC.